होशियार ! खाली पेटमा चिया पिउँदा हुन सक्छ यस्ता गम्भीर समस्या…
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीहोशियार ! खाली पेटमा चिया पिउँदा हुन सक्छ यस्ता गम्भीर समस्या…
August 25, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 14481
धेरै नेपालीको दैनिकी चियाबाट सुरु हुन्छ । चिया नेपाली संस्कृति नै बनिसकेको छ । चिया तयार नपा’र्ने घर सायदै हुन्छ । कतिप’यलाई त कैयौँ कप चिया पिउँदासमेत धित मर्दैन ।
जुन स्वस्थकर छैन । खाली पेट चिया पिउनाले त शरी’रमा गम्भीर असर’समेत पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता छन् खाली पेट चिया पिउनुका ख’तरा :
कतिपयले चियासँगै दूध पनि खाइ’रहेको भन्दै यसलाई स्वस्थकर मान्छन् । तर, यसमा पूर्ण सत्यता छैन । खाली पेट दूध’चिया पिउनाले शरीरलाई थकान मह’सुस गराउँछ ।
कतिपयले कम दूध राखेर चिया पिउने गरेका हुन्छन् । दूधचियाले असर पार्छ भन्दै कालो चिया पिउने’को संख्या ठूलो छ । तर, कालो चियामा भएको पत्तीले पनि पाचन प्रणाली’मा असर पुर्‍याउँछ । त्यसैले चियाभन्दा पहिला पानी पिउनु राम्रो मानिन्छ ।
चियामा टेनिन हुन्छ, जसले शरीरमा भएको आइरन’सँग रियाक्ट गर्छ । जसकारण खाना’पछि चिया पिउनाले शरीर’मा भएको पोषण तत्वलाई नष्ट गर्न सक्छ ।
तपाईं दिनमा ४–५ कप चिया पिउनु’हुन्छ भने यस्तो बानी सुधार गरि:हाल्नुस् । निकै तातो चिया पिउँदा पनि स्वास्थ्य’लाई राम्रो गर्दैन । यसो गर्दा मानिसमा फुड पाइप या घाँटीको क्यान्सर’को सम्भावना बढाउँछ ।
चियामा एसिड’को मात्रा बढी हुन्छ । त्यसैले यसले शरीरमा ग्यास्ट्रिक त बनाउँछ नै, खाली पेट चिया पिउँदा अल्सर’को समस्या पनि बढ्दै जान्छ । – हेल्थ खबर
August 2, 2020 Administer अन्तर्राष्ट्रिय, बिज्ञान प्रबिधि, स्वास्थ्य /जिबनशैली 16715
September 12, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 226327
पहेलो दांत हुनु हिजो आज धेरै को स’मस्या भएको छ। सहि तरिकाले दांत को हेरचा’ह नगर्नु, पराग, सुर्ती दात पहेलो हुँदा आफ्नो अनुहारको सुन्दरतामा दाग आउने मात्र होइन, धे’रैको आत्मा बिश्वाश पनि घटेको देखिएको छ।
August 23, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 15077
कतिपय मानि’समा बस्दा वा सुत्दा खुट्टा हल्लाई रहने बानि हुन्छ । धेरै मा’निसले यसलाई एक प्रका’रको बानि मात्र ठानेर वेवास्ता गर्दछन् । तर यो बानिमात्र नभएर एक प्रकारको रेस्टलेस सिन्ड्रोमको लक्षण हो । के हो